Chii chinonzi brushed Stainless simbi
Iyo tambo yekudhirowa maitiro icharasikirwa nehupamhi hwesimbi isina simbi ndiro kune imwe nhanho, kazhinji 0.1 ~ 0.2mm. Uyezve, sezvo muviri wemunhu, kunyanya muchindwe, uine chakavanzika chakasimba chemafuta nedikita, waya isina waya yekukweva bhodhi inowanzo siya zvigunwe zvemunwe painobatwa neruoko, uye inoda kukweshwa nguva dzose.
Stainless simbi waya yekudhirowa kazhinji ine akati wandei mhedzisiro: yakatwasuka waya pateni, chando pateni, nylon pateni. Yakatwasuka tambo patani isinga bvumidzwe patani kubva kumusoro kusvika pasi, uye zvinowanzo kwana kushandisa yakatarwa yekudhina muchina kufambisa iyo yekushandira kumberi uye mberi. Semhando yechando ndiyo inonyanya kufarirwa iye zvino. Iyo inoumbwa nediki diki akarongeka madota, uye inogona kushandiswa netupukanana sandpaper kuti tiite mhedzisiro.
Iyo nylon patani inoumbwa nemitsara yehurefu hwakasiyana. Nekuti iro nylon vhiri rakapfava mukugadzirwa, rinogona kukuya zvisina kuenzana zvikamu kusvika patani reyiloni.
Waya yekudhirowa bhodhi kazhinji inoreva kumeso kwemavara pamwe chete neboka rezita. Iri raimbova zita rakadhirowewa bhodhi, uye iyo yekumusoro maratidziro inosanganisira mitsara yakatwasuka, mitsara isina kujairika (uye mitsara), mabara uye tambo. Ruvara rwesimbi simbi waya yekudhirowa bhodhi ndeye pamusoro peakasiyana mavara akawanikwa nemakemikari mvura yakanamirwa kana vharuvhu ion yakanamirwa yekupenda kugadzira pane substrate pamusoro peasina simbi waya yekudhirowa bhodhi.
1. Kuvhara kwezvinhu zvese kunofanirwa kuve kwakarurama, uye kutsauka kunobvumidzwa kwehurefu hwechikamu i1mm.
2. Izvo zvinongedzo zvinofanirwa kuongororwa kutwasuka zvisati zvatemwa, zvikasadaro zvinofanirwa kutwasanudzwa.
3. Panguva yewelding, iyo electrode kana waya inofanira kunge iri yerudzi rwakakodzera kuti chinhu chiiswe, uye chitupa chefekitori chinofanirwa kupihwa.
4. Chinhu chacho chinofanira kuiswa panzvimbo chaiyo panguva yekuwelda.
5. Panguva yewelding, majoini esolder ari pakati pezvinhu zvacho anofanirwa kunge akasimba, simbi yacho inofanira kunge izere, uye wave yekumonera pamusoro peiyo weld inofanira kunge yakafanana, uye hapafanire kunge paine mabhureki, zvisina kukwana welds, kutsemuka, slag, weld mapundu, kupisa-kupisa, kukwikwidza kweArc, Kukanganisa senge arc crater uye tsono-senge pores, uye panofanirwa kunge kusine spatter munzvimbo yekutungidza.
6. Mushure mekuti simbi yapera, slag yemoto inofanira kugogodzwa.
7. Mushure mekunge zvinhu zvacho zvasunganidzwa uye zvakaunganidzwa, zvinofanirwa kutsetsenurwa uye kukwizwa nemuchina unobatwa nemaoko kuti chitarisiko chive chakatsetseka uye chakachena.